DAAWO SAWIRRO: Shirweynaha beelaha Galmudug oo si habsami leh uga socda Dhuusamareeb & Wararkii ugu dambeeyay maanta. | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO SAWIRRO: Shirweynaha beelaha Galmudug oo si habsami leh uga socda Dhuusamareeb...
DAAWO SAWIRRO: Shirweynaha beelaha Galmudug oo si habsami leh uga socda Dhuusamareeb & Wararkii ugu dambeeyay maanta.
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Waxaa weli si habsami leh uga soconaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug, shirweynaha dib u heshiisiinta beelaha Galmudug.
Shirweynaha oo maalintii labaad ka soconaya Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa goobta uu ka soconayo ku sugan ergooyin beelaha ku matalaya shirweynahaasi.
Wararka ay helayso mareegta Halqaran.com ayaa sheegaya in shirweynaha looga hadlayo arrimaha dib u heshiisiinta beelaha iyo sidii Galmudug loogu dhisi lahaa maamul ay dadka ku mideysan yihiin.
Sidoo kale, wararka ayaa intaasi ku daraya, in shirweynaha ka socdo Xarunta Gobolka Galgaduud lagu xalin doono khilaafaadka beelaha iyo siyaasiyiinta Galmudug qaarkood u dhaxeeya.
Ujeedka shirweynahan ayaa waxa uu yahay, sidii la isugu soo dhaweyn lahaa beelaha degga Galmudug, ka hor inta aan la qaban Doorashooyinka Madaxtooyada iyo Baarlamaanka Galmudug.
Ugu dambeyn, Ra’iisal Wasaaraha xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Xasan Cali Khayre oo booqasho ku joogga Magaalada Baydhabo ayaa waxaa lagu wadaa in bartamaha bishan uu soo xiro shirweynaha iminka ka socda magaalada Dhuusamareeb.
Shirweynaha beelaha Galmudug
si habsami leh